Myat Shu - 2011 March
You are here : Myat Shu » Archives for March 2011
ဆယ်စုနှစ် တနှစ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၁၅)
Published By Myat Shu On Thursday, March 31st 2011. Under ဆောင်းပါး
(... မြို့မ တူရိယာအသင်းကလည်း ရွာစားတို့နှင့် လိုက်ဖက်ညီစွာပင် ချိုချိုအီအီ ဂေါ်ဂေါ်ဂီဂီများကို တွဲဖက်တီးမှုတ်ကြတော့သည်။ ...) မန်းသင်္ကြန်များတွင် ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ရာ၌ ထိုအကြိမ်သည်ကား ကျွန်တော့်အတွက် အပျော်ဆုံးကာလဟုပင် ဆိုချင်ပါတော့သည်။ ရွှေမန်းမေမဏ္ဍပ်ပေးမှ ပင်တိုင်ဆိုင်းပညာရှင်တို့က ဝေဆာစွာ တီးခတ်သောအခါ ခြောက်လုံးပတ်ပိုင်ရှင် ကိုထွန်းရင်သည် သူ့ဗုံတို့ ဗုံရှည်နားမှ ခွဲခွာပြီးလျှင် ကွေးနေအောင် ကပါလေ၏။ ကိုထွန်းရင်ကား မြို့မ ဇာတ်သဘင် အဖွဲ့ကြီးများ ဖွဲ့စည်းလျှင် မင်းသားဖြစ်မည့်သူတည်း၊ အစ်မကြီး မထားရီကလည်း ခေသူမဟုတ် ချေ။ ကိုထွန်းရင်က လိမ်ကာ ကောက်ကာ တွန့်ကာ ကွေးကာကလျှင် သူကလည်း အနုကလေး အယိုင်ကလေးများဖြင့် လှည့်ကာပတ်ကာ ကလေသည်။ ပြီးနောက် ကျွန်တော်မှစ၍ အဖွဲ့သားအားလုံးကို ... Continue Reading
ဆယ်စုနှစ် တနှစ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၁၄)
Published By Myat Shu On Wednesday, March 30th 2011. Under ဆောင်းပါး
(... ကျွန်တော့်မှာ နှုတ်ခမ်းစူကာမူမှာပင် ငိုမဲ့မဲ့ နွဲ့တယ်ထင်၊ မောင့်အပါးက တစ်ဖ၀ါးမခွာချင်၊ သနားစရာပုံရုပ်သွင်)ဟူသော မြို့မငြိမ်း၏သီချင်းကိုပင် သီကျူးပေးရပါ၏။ ...) သဘင်မျိုး သဘင်ရိုးတို့ စိုးမိုးသည့်ရပ်ကွက်ပေမို့ သဘင်အရိပ် အငွေ့တို့ကိုကား ကြည်မွေ့ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိခံစားရသည်။ အကတွင်တော့ သူမတူအောင် ဆန်းဆန်းစုံစုံ ကမ်းကုန်အောင် ကနိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ အဆင်အပြင်ကလေးများ မှာလည်း တစ်မျိုးတစ်ဘာသာပင်ဖြစ်သည်။ အကသန်သူတွေဆိုတော့ သူတို့မှာ ချွေးတရွှဲရွှဲနှင့်ဖြစ်နေကြသည်။ မိတ်ကပ် မျက်နှာချေလိမ်းနေကျမို့ နုပါးပြင် မျက်နှာသွေးတို့ နီထွေးထွေးလည်းရှိလှသည်။ ဆံကေသာ သုံးတောင်ကြော့ကို ဖြေလျော့ လိုက်လျှင် ပျောင်းပျော့ရှင်းသန့်စေရန် ဟူ၍ ဆီမွှေးများကိုလည်း လိမ်းကျံထားရပေရာ ကရင်းခုန်ရင်း၌ ကိုယ်ငွေ့အပူရှိန် ကြောင့် ဆီမွှေးနှင့် ချွေးစက်တို့ ရောယှက်ကာ နဖူးပြင်ထက်သို့ စီးကျလာရာဝယ် ဦးစွန်းမှသည် ... Continue Reading
ဆယ်စုနှစ် တနှစ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၁၃)
Published By Myat Shu On Tuesday, March 29th 2011. Under ဆောင်းပါး
(... ပြီးမှ ကျွန်တော်လည်း ကိုဂျော့ကို ထားပစ်ခဲ့ပြီးနောက် မြို့မအသင်းမှ အကြိုကားခေါ်ရာ နောက်သို့ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့ရပေတော့သည်။ ...) ဒါးတန်းဝင်း မြို့မအသင်းတိုက်ရှေ့ရှိ မြို့မတေးသံယာဉ် တည်ရှိရာ လမ်းမကြီးကား ယမန်နေ့ကထက်ပင် စည်ကား သိုက်မြိုက်လှသည်။ ပရိသတ်ကြီးကိုမြင်သော် ပူလောင်မောဟိုက်၍နေသော ကျွန်တော့်ရင်မှာ တဒင်္ဂအတွင်း အေးငြိမ်း၍ သွားလေသည်။ သည်ပရိသတ်ကြီးကား မြို့မနှင့် မြို့မမိတ်ဆွေ ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးတို့ကို ချစ်ခင်နှစ်သက်၍ အားပေးလိုသောကြောင့် တကူးတက လာရောက်၍ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှု နေခြင်းပေတကားဟူသော အသိမှာ စောစောက ဘလောင်ဆူလျက်ရှိသော ကျွန်တော်၏ သောကမီးတို့ကို ပိန်းကြာဖက်မှ ရေစက်များကဲ့သို့ လျှောကျပျောက်ကွယ်သွားစေလေ၏။ ကျွန်တော်သည် မြို့မအသင်း ကားပေါ်သို့ ခုန်ပျံကျော်လွှားကာ တက်ရောက်သွားပြီးနောက် မိုက်ကရိုဖုန်းတိုင်ရှေ့ တွင် နေရယူပြီးသည်နှင့်ပင် (ချစ်ခင်ကြတဲ့အားလုံးမိတ်ဆွေ)ဟု ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, March 26th 2011. Under ကဗျာ
ဆင်းရဲတော့ ကရုဏာ ချမ်းသာတော့ ပီတိ။ အဖိုးအို မသေသေးခင်က ကိုယ့်သွေးတွေ ကောင်းစေသောဟု ဟောခဲ့ပေ၏။ ညီညွတ်တော့ စိတ်ကြည် မညီတော့ စိတ်မော။ အဖိုးအို မသေသေးခင်က တောင်ဝှေးကို အဖော်ပြုပါလို့ သွေးစည်းမှုဟော။ လိမ်မာတော့ အားမာန် မိုက်ပြန်တော့ သနား။ အဖိုးအို မသေသေးခင်က ငြိမ်းအေးကာ မနေဆိတ်ရှာဘု စိတ်ကြောင့်ကြများ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကျွန်ဖြစ်တော့ တဆစ်မှ ငုံ့မခံ တော်လှန်တဲ့ တို့အဖိုး။ ကိုယ့်ရာဇ၀င် အဖြစ်ရှုံးတော့ လုံးလုံးမှ ငုံ့မခံ တော်လှန်တဲ့ တို့အဖိုး။ မြန်မာ့သွေးပေပ နှုတ်ခမ်းမွေးတတောင်ကျော်နဲ့ ကလောင်မော် စိန်တချောင်းရယ်နဲ့ သောင်းမြန်မာ နယ်တရိုး ဒေါင်းလံလွှင့်ထိုး။ တင်မိုး ... Continue Reading
ရမ္မက်၏ သမီးပျိုများ (၃)
Published By Myat Shu On Saturday, March 26th 2011. Under ဘာသာပြန်
အခန်းအမှတ်၂ မစ္စတာစမစ် အမှိုက်ပစ်ပြီး ပြန်အလာတွင် နောက်ဖေးတံခါးကို သော့ခတ် လိုက်သည်။ သူ့က သူ့မိန်းမ အေမီလီကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးပြရင်း ငြင်သာတိုးလျသည့် လေသံနှင့် "သိလားမိန်းမ .. ငါတို့က တော်တော်ကံကောင်းတယ်" ဟု ဆိုလိုက်သည်။ အရပ်အမောင်း အလောတော်နှင့် မစ္စတာစမစ်က အသက်အားဖြင့် ၅၆ နှစ်သာ ရှိသေးသော်လည်း ထိပ်က လုံးလုံးပြောင်နေပြီ။ လူကောင်ခပ်သေးသေးနှင့် ဆံပင်တွေကို ခေတ်ဟောင်းပုံစံလို လည်ဂုတ်မှာ စုချည်ပြီး လုံးထားသည့် သူ့မိန်းမက ထမင်းစားစားပွဲနားက ရပ်ကြည့်နေသည်။ သူက ဘာအပွင့်မှ မပါသည့် တဖြောင့်တည်း ချည်ဂါဝန်ပြောင်ကို ၀တ်ထားပြီး ထိပ်ဝိုင်းလေဒီရှုး စီးထားသည်။ သူ့မျက်နှာကို မိတ်ကပ်မလိမ်းထားပဲ၊ လက်သည်းတွေကလည်း တိုတိုတိတိနှင့် တကယ့်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိလှသော ... Continue Reading
ဆယ်စုနှစ် တနှစ်စွန်း မန်းသင်္ကြန် (၁၂)
Published By Myat Shu On Saturday, March 26th 2011. Under ဆောင်းပါး
စဉ်းစားရင်းမှ ရယ်ချင်လာသဖြင့် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောလိုက်ပြီး ရှေ့မှကားကို ကျော်တက်ကာ အပြင်းမောင်းနှင်လိုက်ရာဝယ် ကျွန်တော့် မျက်လုံးများ ပြာဝေသွားရပါ၏။ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်၌ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ရပ်ရေး ရွာရေးအတွက် လမ်းထွက်ပြီးလျှင် လာသမျှ လူသူ ယာဉ်ရထားတို့ကို အလှူငွေ ကောက်ခံတတ်ကြသည့် ဓလေ့များ ရှိခဲ့ကြ၏။ ထိုရရှိသော အလှူငွေမှ နေပြီး သက်ကြီးဝါကြီးများ ပူဇော်ကြခြင်း၊ ငါးသက်စေ့လွှတ်ခြင်း၊ စေတီပုထိုးများ ပြုပြင်ကြခြင်းတည်းဟူသော ကုသိုလ်ရေးကိစ္စအ၀၀ ဆောင်ရွက်ကြလေ့ရှိသည်။ ယင်းမှာ သင်္ကြန် မတိုင်မီကတည်းက အလှူခံကြခြင်းဖြစ်ပြီး သင်္ကြန်အခါရောက်သော် လှူဖွယ်အမှုများ ပြုလုပ်နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ သင်္ကြန်တွင်းကြီး၌ ရေစိုခံကာ ကောက်ယူကြခြင်းမျိုး သိပ်ပြီး မတွေ့ရချေ။ ယခု ကျွန်တော် တွေ့ရသော မြင်ကွင်းကား လမ်းကို ပိတ်ဆို့၍ ... Continue Reading
ရက် စွဲ ( 2011 )
Published By Myat Shu On Friday, March 25th 2011. Under ကဗျာ
တစ်နေ့မှာ စင်ရှေ့ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ် ထွက်ခဲ့ပါသလဲ အသက် ဘယ်လောက် ရှူခဲ့ပါသလဲ ခြေလှမ်း ဘယ်လို လှမ်းခဲ့ပါသလဲ မျက်တောင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် ခတ်ခဲ့ပါသလဲ ပါးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်လောက် ရွေ့လျားခဲ့ပါသလဲ အစားအသောက် ဘယ်လောက် အသုံးပြုခဲ့ပါသလဲ အမှိုက်နဲ့ အညစ်အကြေး ဘယ်လောက် စွန့်ပစ်ခဲ့ပါသလဲ စကား ဘယ်နှစ်ခွန်း ပြောခဲ့သလဲ စာ ဘယ်နှစ်မျက်နှာ ရေးခဲ့သလဲ နားကို ဘယ်လို စွင့်ထားသလဲ လက်တွေ ဘယ်လို လှုပ်ရှားခဲ့သလဲ အ၀တ် ဘယ်နှစ်စုံ လဲခဲ့သလဲ ရေ ဘယ်နှစ်ခါ ချိုးခဲ့သလဲ သွား ဘယ်နှစ်ကြိမ် တိုက်ခဲ့သလဲ မျက်နှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် သစ်ခဲ့သလဲ ဘာတွေဘယ်လောက် ပေးခဲ့ / ယူခဲ့သလဲ ဘယ်နှစ်ကြိမ် လဲကျ / ပြန်ထခဲ့သလဲ စင်နောက် ဘယ်နှစ်ခါ ၀င်ခဲ့ပါသလဲ တစ် ၊ နေ့ ၊ မှာ မပြင်ရင် ပုဆိန်က တစ်လက်ပဲ ရှိပါတယ် တစ် ... နေ့ ... ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, March 16th 2011. Under ၀တ္ထု
နားထဲမှာ အသံသဲ့သဲ့လေးပဲ ကြားနေရတယ် ဆိုရင်တောင် အဲဒါတွေက ကင်မရာက ရှပ်တာသံတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မအနားက ပုံရိပ်တွေ၊ ဖလင် ကွက်တွေလို တစ်ကွက်ပြီး တစ်ကွက် မြင်တွေ့နေရတဲ့ ပုံရိပ်တွေ။ အကယ်၍များ ဒါဟာ ကျွန်မရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုရင် ကျွန်မဟာ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေအကြောင်း ကျွန်မချစ်တဲ့ သူတွေအကြောင်း တွေးနေသင့်တာပေါ့။ ခုလိုမျိုး ကြောင်စီစီ အတွေးမျိုးနဲ့ ကင်မရာခလုတ်နှိပ်သံတွေ ကြားယောင်နေမယ့်အစား၊ ပုံရိပ်တွေကိုပဲ ပြေးမြင်နေမယ့်အစား ကျွန်မလုပ် သင့်တာက တစ်ခုခုလို့ ထင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း လုပ်ဖြစ်နေတာက ဒီပုံရိပ်တွေကြားမှ လှည့်လည် သွားလာမိနေတာပဲ။ ဟုတ်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ငြိမ်းအေးရာ တစ်ချို့က အဲဒီပုံရိပ်တွေ ကြားထဲမှာပဲ ရှိတယ်။ ကျွန်မပြုံးတယ်၊ ကျွန်မရီတယ်၊ တစ်ခါတရံ ... Continue Reading